Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska oo gaaray magaalada Addis Ababa | Dayniile.com
Home Warkii Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska oo gaaray magaalada Addis...
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska oo gaaray magaalada Addis Ababa
Wararka ka imaanaya Dalka Itobiya ayaa sheegaya in ay halkaas ka jirto xaalad adag gaar ahaan caasimadda Ethiopia ee Addis-Ababa .
Saacadihii la soo dhaafay waxaa buux dhaafay Garoomada Itobiya gaar ahaan caasimadda Ethiopia ee Addis-Ababa , waxaana dadkii watay Pasaporada ajnabiga ah ay ka baxayaan dalkaas, ayaga oo aadaya wadamadii ay ka yimaadeen.
Waxaa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu weecinayo weerar lagu qaado caasimadda Ethiopia ee Addis-Ababa, kadib markii la sheegay in Maleeshiyaadka Tigray-ga oo garab ka helayo kuwa Oromada ay kulaalayaan caasimadda Ethiopia ee Addis-Ababa.
Waxaa saacadihii la soo dhaafay gaaray halkaas Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Feltman si uu u cadaadiyo in la hakiyo howlgallada militari loona billaabo wadahadallo xabad joojin ah.
Sidoo kale Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku baaqay kulan ay hogaamiyayaasha Bariga Afrika isugu yimaadaan 16-ka November si looga wadahadlo dagaalka dowladda Ethiopia iyo kooxda Tigrayga ee TPLF.
ururka goboleedka IGAD ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah, wuxuuna dhinacyada ku booriyey inay muujiyaan isxakameyn.
Previous articleGudoomiye Mursal muxu kala hadlay Gudoomiyaasha Barlamaanka Maamul Gobaleedyada
Next articleTaliyaha militariga Kenya oo si kulul uga hadlay go’aankii maxkamada ICJ ee badda Soomaaliya
Maqaayadda caalamiga ah ee KFC laamaheeda ku yaalla Kenya oo soo...
Maqaayadda caalamiga ah ee KFC laamaheeda ku yaalla Kenya ayaa waxaa soo wajahay gabaabsi dhanka baraadhada shiilan ah ama jibsi. “Dhammaantiin waxaad jeceshehiin baradhadeenna shiilan,...
Koonfur Afrika oo lagu maxkamadeeyey qof lagu eedeeyey inuu gubay baarlamaanka...
Sadax qof oo u dhashay dalka Nayjeeriya oo samaynayay lacagta Somaliland...
Xabad joojin hor dhac ah oo laga gaaray Colaadii Saaxo Maygaag
Duqa Muqdisho oo la kulmay Mas’uuliyiin ka socday Shirkad laga leeyahay...